PressReader - Ilanga: 2018-02-12 - Kabayizwa eyokubuyisa umhlaba
Kabayizwa eyokubuyisa umhlaba
Ilanga - 2018-02-12 - Izindaba - AFP sazim@ilanganews.co.za
UMENGAMELI waseZimbawe, uMnu Emmerson Mnangagwa, uthi leliya lizwe ngeke liwubuyisele umhlaba odliwe kubalimi abamhlophe eminyakeni elinganiselwa kwengama-20 edlule.
“Ngeke kwenzeke lokho,” kusho uMnu Mnangagwa ngoMgqibelo ekhuluma namalungu eqembu lakhe, iZimbabwe African National Union - Patriotic Front (Zanu-PF). Ukhuluma kanjena nje, kusaphele izinyanga ezimbili umlimi omhlophe, uMnu Robert Smart, ebuyiselwe umhlaba wakhe emuva kokuphucwa wona nguMnu Robert Mugabe ngesikhathi engumengameli.
IZimbabwe iphume umkhankaso wokuhlwitha umhlaba obuphethwe ngabamhlophe kusukela ngowezi-2000 ukuze unikezwe abampisholo abebengenawo. Izinkulungwane zabalimi abamhlophe ziphenduke ondingasithebeni emuva kokuba ziphucwe umhlaba.
UMnu Mugabe ubethi lokhu kuzosiza abampisholo abebencishwe amathuba ngesikhathi kubusa uhulumeni wamakoloni. Abahlaziyi basola indlela olusingathwe ngayo udaba lomhlaba, bathi yilona oluholele ekushayekeni kwezolimo kwagcina ngokuthi iZimbabwe - ebiyaziwa njengezwe lenala - iphile ngoku- dla okusuka kwamanye amazwe. “Umhlaba wethu kumele ukhi- qize, kumele sidle ngawo, sisebenze ezolimo ngendlela yesimanje,” kusho uMnu Mnangagwa othe okwenzeke phambilini ngodaba lomhlaba, kakulula ukukubuyisela emuva.
Lo mengameli ongene kulesi sikhundla emuva kokuba umbutho wezempi wakuleliya lizwe uvuke indlobane uphikisana noMnu Mugabe - obesehole leliya lizwe kusukela ngowe-1980 - uthe ukhetho olulandelayo luzokuba ngoNtulikazi (July) nonyaka.
“Sifuna ukhetho olunokuthula, sifuna abantu babumbane. Kasikho isidingo sokuthi iZanu-PF ibe nodlame futhi kasikho nesincane isizathu sokuthi noma yiliphi-ke nje iqembu lezepolitiki lisebenzise udlame,” kusho uMnu Mnangagwa.
Uthe okuseqhulwini lezinto ezifunwa wuhulumeni wakhe, wukuvusa umnotho waleliya lizwe osuhamba ngesisu kuhle kwenyoka. “Umnotho wethu uyadunguzela, imisebenzi kayikho, intsha yethu kayinawo amathuba anele, inqwaba yabantu kayikwazi ukuthenga izinto ezibalulekile kanti ingqalasizinda yethu isindala,” kusho yena.
ISITHOMBE NGABE: WSJ.NET
UMENGAMELI waseZimbabwe, uMnu Emmerson Mnangagwa oqashwe ngamasosha, uthi abalimi abamhlophe abaphucwe umhlaba kusaphethe uMnu Robert Mugabe, mabahlanze ngedela ngeke bawubuyiselwe.